?? ခရီးသွားချင်တဲ့သူတွေအတွက် ..သိဖို့လိုအပ်သည့်အကြောင်းများ ?? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ?? ခရီးသွားချင်တဲ့သူတွေအတွက် ..သိဖို့လိုအပ်သည့်အကြောင်းများ ??
?? ခရီးသွားချင်တဲ့သူတွေအတွက် ..သိဖို့လိုအပ်သည့်အကြောင်းများ ??
Posted by Shar Thet Man on Apr 11, 2017 in Local Guides, Travel |4comments
? ?.If you don’t have money, don’t be sad, you can follow my ways as below!! ? ?
ပိုက်ဆံမရှိလို့ ခရီးမသွားဘူးလို့ပြောပြောနေကြလို့ ဒီကနေမွန်လေးရဲ့ ခရီးသွားတော့မယ်ဆို..ကြိုလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေ အလေ့အထားလေးတွေကိုပြန်ရှယ်ပေးပါမယ်။ မွန်လေးရဲ့ ခုထိသွားနေတဲ့ခရီးစဉ်အားလုံးက ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံ ( ကိုယ်ရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံ ) နဲ့သွားခဲ့တာတွေပါ။
၂၀၁၇မှာ ကိုယ်တော့ ဘယ်ကိုသွားမယ် ရောက်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီး အရင်ဆုံး သွားချင်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို စာရွက်နဲ့ချရေးပါတယ်။ တကယ်သွားဖြစ်မှရယ်လို့မဟုတ်သေးဘူးနော်..ရည်မှန်းထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုပေါ့။
ကိုယ့်သွားမယ့်နိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုကိုလည်းကြည့်ပါ။ မွန်လေးတို့နိုင်ငံကမိုးတွင်းဖြစ်လို့ သူတို့မှာလည်း မိုးတွင်းလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့။
ဘဏ်ထဲမှာငွေစုတတ်တဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ပါ။ ငွေနည်းနည်းထည့်လို့အတိုးနည်းတယ်ဆိုပေမယ့် ငွေများလာတဲ့အခါ အတိုးများလိုို့ ပိုလျှံတဲ့ငွေနဲ့ခရီးကောင်းကောင်းထွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ခရီးထွက်တဲ့အခါယူသုံးလိုက်ရုံပဲ။
ကိုယ်သွားမယ့်နိုင်ငံအကြောင်း အားရင် အားသလို အင်တာနက်ကနေ ရှာဖတ်ရပါမယ်။ ဘလော့တွေကော၊ Trip Advisor တွေကော အကုန်ရှာပါ။ ပြီးရင် စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ (သို့) ကွန်ပျူတာမှာချရေးပါ။ ကိုယ်ဘယ်ကိုလည်မယ်ဆိုတဲ့trip planလေးတော့ခရီးမသွားခင်ရှိ ထားသင့်ပါတယ်။
# ✂️ အပိုပိုက်ဆံကုန်မှာတွေကို ခုထဲကလျှော့ပါ။
ဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လုပ်ကြို ပြီး တွေးတောတတ်ပါ။ ခရီးတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်လည်း ဟိုရောက်ရင် ဘာတွေဝတ်မယ်။ ဘယ်မှာတည်းမယ်။ ဘယ်ကိုသွားမလဲ စသဖြင့်ပေါ့နော်။
#?Credit Card လေးလုပ်ထားပါ။
Credit Card လုပ်ခြင်းကလည်း ခရီးထွက်ရင် အတော်လေးအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။
ဒီအချက်ကလေးတွေကို အနည်းဆုံး ၃ခုလောက် လုပ်နိုင်ထားရင်တော့ ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ခရီးတွေအများကြီးထွက်နိင်တော့
ကျော်တို့နိုင်ငံသားတော်တော်များများက ခရီးထွက်ဖို့ကြောက်တတ်တယ်လို့ ထင်မိတယ် မမွန်လေးရေ။
ဟိုကိုသွားအစဉ်ပြေပါ့မလား ဒီကိုသွားအစဉ်ပြေပါ့မလားနဲ့တွေးပူတတ်သလိုပဲ။ ပီးတော့ မမွန်လေးပြောသလို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလဲမရှိသလောက်ပဲ။
ပီးတော့ခရီးသွားမယ်ဆို ဘုရားဖူးခရီးစဉ်လောက်လို့ပဲသဘောပေါက်ကျတာ။ ကိုယ်သွားမယ့်ဒေသရဲ့ အထင်ကရတွေ လေ့လာစရာတွေကိုတော့ မေ့ထားတတ်လေရဲ့။
စာအုပ်ရေး..။ ဓာတ်ပုံရိုက်..။ စပွန်ဆာရှာ.. စသဖြင့်ပေါ့..။
>> Courage : ဟုတ်ပါတယ် အဲဒါကြောင့်လည်း အခြေခံဗဟုသုတအားဖြင့် မွန်လေးတို့လူမျိုးတွေက အားနည်းတာပေါ့နော်။ နိုင်ငံခြားသားတွေဆို သူတို့သိတတ်စ ၁၈ နှစ်ဆိုတာနဲ့ခရီးတွေထွက်ကြ၊ အတွေ့အကြုံတွေရ ပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြနဲ့ ပိုအောင် မြင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေက ငွေမရှိလို့မသွားနိုင်ရတာနဲ့ ငွေရှိတော့လည်းသုံးပစ်ကြတာများတာဆိုတော့ ကိုယ့်
kai : ဟုတ်ပါတယ်